Sida loo beddelo farta Instagram-ka: Siyaabo kala duwan oo loo beddelo | Hal-abuurka khadka tooska ah
Instragram waa mid ka mid ah codsiyada aadka loo isticmaalo ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn labadaba. Waxaan ognahay sida loo daabaco sawirka oo ay la socdaan qoraal la socda sawirka, waxaan sidoo kale soo galin karnaa sheeko muujinaysa waxa aan sameyneyno mar walba. Laakiin dhab ahaantii ma naqaan sida loo beddelo farta?
Casharradan waxaan si kooban ugu sharraxaynaa waxa uu yahay qalabkani, haddii aadan weli soo gelin adduunkeeda, iyo sidoo kale Waxaan sidoo kale ku tusinnaa casharro leh tillaabooyin fudud halkaas oo aad ka beddeli karto farta sidaad jeceshahay iyo habkan, si aad awood ugu yeelatid in aad wax badan shakhsiyeyso qalabkan noqday mid moodada ah.
2.3 Halkee ka bedeli kartaa farta
3 Codsiyada lagu beddelayo farta
3.2 looxa farta
Instragram waxaa lagu qeexaa sida shabakad bulsho iyo codsi leh ujeeddada awood u leh inuu daabaco sawirada iyo fiidiyowyada labadaba halkaas oo aad ka codsan karto saamaynta sawireed ee aan dhamaadka lahayn sida filtarrada, midabada, iwm. Sawirada iyo fiidiyowyada waxaa lagu wadaagi karaa labadaba goobta iyo shabakadaha kale ee bulshada.
Codsigan ayaa noqday shabakada bulshada ee loogu isticmaalka badan yahay maanta, maadaama uu gaadhay dad aad u kala duwan, oo isugu jira dhalinyaro, dhalinyaro iyo dad waaweyn.
Shabakaddan bulsheed ee leh in kabadan 1000 milyan oo isticmaale Waxa loo istcmaalaa in lagu wadaago muuqaalada iyo fiidyowyada, iyada oo la adeegsanayo filtarrada iyo in lagu helo sawir mobaylka lagu qaado si ay u noqoto sawir xirfad leh.
Waxa lagu gartaa codsigan waa in sidoo kale loogu talagalay ganacsiga online-ka ah, sidoo kale wuxuu hadda noqonayaa nooc ka mid ah suuqyada caalamiga ah maadaama uu helayo boggaga internetka ee dibadda ah.
Oo kaliya maahan, naftaada u hur sawir qaadista iyo sidoo kale cunto karinta, waxaad abuuri kartaa astaanta ganacsigaaga guud, habkan Instagram ayaa kuu sheegaysa koritaanka ee ganacsigaaga oo u ogolow daabacaadda inay gaadho tiro badan oo booqashooyin ah.
Marka la soo koobo, haddii aad u baahan tahay inaad korto oo aanad garanayn sida, codsigan wuxuu ku siinayaa doorashooyin kala duwan si aad u hagaajisid shaqadaada maalinba maalinta ka dambeysa. Sida dhammaan shabakadaha bulshada, waa inaad la falgashaa dadka aad xiisaynayso inay ku raacaan.
Ku samee shaandhaynta hashtags oo raac akoonnada kuu muuqda kuwa xiiseeya, si ay kuu ogaadaan, ku siiyaan "like" daabacaadadooda ama faallo ka bixiyaan. Aad bay suurtogal u tahay inay dib kuu raacaan.
Waa muhiim in haddii aad samaysay akoon ganacsi si aad u horumariso ganacsigaaga, isticmaal isticmaaleyaashaada uga fiirso wararkaaga daabacado, gariiro, sheekooyin, sawirro ama fiidiyowyo goobtaada ama sidoo kale la wadaag shaqada isticmaalayaasha kale.
Isticmaal waxa aan u naqaano hashtag ahaan, tani waxay u oggolaanaysaa bulshada Instagram-ka inay arkaan daabacaada oo ay awoodaan si fiican u aqoonsan shaqadaada.
Ku dhiiri geli isticmaalayaasha kale oo si fiican ula soco shaqadaada. Sidoo kale algorithm-kaaga ka dhig mid firfircoon, tani waxay u oggolaanaysaa Instagram waxay ku siinaysaa awood aad ku waanin karto oo ku tuso shaqooyinka la xiriira kaaga.
Sida kor ku xusan, la falgeli isticmaalayaashaada oo dadka aad raacdo, faallo ka bixi qoraaladooda, waxayna noqon doontaa mid isdhaafsan.
Waxa ugu horreeya ee aan u baahanahay inaan ku bilowno waa raadi far-dhaliye. Waxaa jira dhowr goobood oo aad booqan karto halkaas oo ay ku leeyihiin ilo kala duwan. Kuwani waa qaar ka mid ah koronto-dhaliyeyaasha aad ka heli karto:
Waraaqaha iyo farta
Xaqiiqdu waxay tahay, dhammaantood waxay leeyihiin shaqo isku mid ah, laakiin Meta Tags ogolaanayaa eegno isha. Sidan ayaad ka hubin kartaa bilawga haddii aad jeceshahay sida weji gaar ah u ekaado. Hadda aan sii wadno casharrada.
Ku qor qoraalka aad rabto inaad bedesho qalabkuna wuxuu ku tusi doonaa liiska xarfaha la heli karo. Waxaad dooran kartaa midda aad jeceshahay ama la socota shakhsiyadda astaantaada. Markaad doorato, dhagsii ikhtiyaarka "Copy".
Tag akoonkaaga Instagram oo geli ikhtiyaarka "Edit profile"
Ku dheji font qaybta "Magaca" oo dhagsii "OK/Send".
Ku laabo astaantaada oo hubi haddii farta aad dooratay ay ilaalinayso sifooyinka aad filaysay. Taas lidkeeda, waxaad isku dayi kartaa doorashooyin kale. Si macluumaadkaagu u soo baxo oo si buuxda uga tarjumo nuxurka astaantaada, isticmaal farta Instagram oo u beddeleysa faa'iidadaada. Xusuusnow in sharaxaadda astaantaada Instagram ay tahay warqadda hordhaca ah, taas oo ah, qof kasta oo soo booqda wuxuu heli doonaa fikrad guud oo hadhow u horseedi doonta inay dib u eegaan dhammaan daabacadahaaga.
Halkee ka bedeli kartaa farta
In profile bio waxaa jira calaamado ama xisaabo magacyo beddela. Kuwo kalena waxay ku jiraan xarfo kala duwan oo sharraxaadda ah. Iska ilaali inaad bedesho xarfaha Hashtags oo had iyo jeer dooro xarfaha la akhrin karo.
Markaad ka jawaabeyso faallooyinka waxaad ku dari kartaa xarfo kala duwan, Waxaad xitaa isticmaali kartaa tan marka aad waydiiso su'aalo, wax aan macquul ahayn ama ciyaaraha maadaama aad u qori karto xarfo kala duwan isticmaale kasta.
Sheekooyinka xitaa waxaad isku dari kartaa naqshado kala duwan oo waxaad abuuri kartaa sheekooyin aad u soo jiidasho leh adigoon isticmaalin barnaamijyada naqshadeynta.
farriimaha tooska ah Sidan waxaad sidoo kale ku beddeli kartaa erayada Instagram oo aad la wadaagto fariimaha gaarka ah kuwa raacsan.
Codsiyada lagu beddelayo farta
Waxay u badan tahay Codsiga ugu caansan ee lagu beddelo font-ka Android waa iFont. Iyadoo in ka badan 10 milyan la rakibay iyada oo loo marayo Google Play, waa tixraac qaybta Barnaamijyada habaynta ee android, run ahaantiina waa mid ka mid ah kuwa sida ugu wanaagsan u guta hawsheeda.
Isla marka aad rakibto app-ka, liis weyn oo ilo nooc kasta ah ayaa ka soo muuqan doona shaashadda. Far kasta waxaa ku jira cabbirka xirmada soo dejinta ee agteeda ah, iyo sidoo kale waxay tilmaamaysaa luqadda loogu talagalay. Intaa waxaa dheer, shaashadda ugu weyn waxaan ka heli doonaa dhowr tabs: Lagu taliyay, Raadinta iyo Ilahayga.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho mid ka mid ah xarfaha ay soo jeedisay iFont, kaliya waa inaad ku dhufo mid ka mid ah, oo dhexda "Download" badhanka hoose, billow soo dejinta xirmada ay ku jirto fartu. Ugu dambeyntii, kaliya dhagsii "Codso". Iyada oo ku xidhan aaladda la isticmaalayo, font si toos ah ayaa loo dabaqi karaa, ama waxa lagu rakibi karaa codsi ahaan, ka dibna waa in lagu doortaa goobaha font ee nidaamka nidaamka.
Xitaa haddii aadan ku rakibin xarfaha xarfaha Android kaaga, abka FontBoard wuxuu kaloo kaa caawinayaa inaad ku beddelato font-ka kiiboodhka. Marka la soo koobo, FontBoard waa kiiboodhka ka kooban 50+ farood oo bilaash ah oo aad ku qori karto WhatsApp, Instagram, Facebook, iwm.
Ka dib marka aad rakibto oo aad furto app-ka markii ugu horeysay, waxaad u baahan doontaa inaad siiso ogolaansho si uu u noqdo kiiboodhka taleefankaaga. Halkaa, marka aad soo dejiso kiiboodhka app, FontBoard ayaa soo muuqan doona. Kiiboodhka dushiisa waxa ku yaal xarfaha kala duwan ee aad wax ku qori karto. Hoos u dhaadhac baarka si aad u doorato midka aad ugu jeceshahay.
Waad hubin kartaa taas xarfaha qaar ayaa xanniban, oo waa in FontBoard ay leedahay nooc lacag ah oo aad iska qori karto si aad u hesho buug-gacmeedka xarfaha oo dhammaystiran.
Sida codsigii hore, Fonts waa kiiboodhka xarfaha iyo emojis mobilkaaga Android. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira farqi cad: Fonts ma laha xayeysiisyo badan iyo Dhammaan farmahoodu waa bilaash. Ka dib marka aad soo dejiso oo aad rakibto app-ka, fur si aad ugu dejiso sidii kiiboodhka taleefankaaga oo sii ogolaanshaha uu u baahan yahay si uu si guul leh ugu shaqeeyo.
Kadib, kaliya waa inaad furto kiiboodhka codsi kasta, u gudub barta sare si aad u doorato font-ka aad ugu jeceshahay oo bilow teeb.
Taasi waa sida ay u fududahay in la isticmaalo kiiboodhka Fonts, kaas oo la shaqeeya WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat iyo codsiyo kale oo badan.
Beddelka kale ee caanka ah ee iFont waa HiFont, codsi bilaash ah kaas oo, sida kii hore, kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho font-ka mobilada Android, oo bixiya Buug-gacmeed aad u weyn oo aad soo dejisan karto, Aqlabiyadda ugu badan gebi ahaanba waa bilaash.
Si ka duwan iFont, xarfaha HiFont waa in la soo dejiyo oo lagu rakibaa Google Play sidii codsiyo gooni-gooni ah. Samaynta sidaas waxay keenaysaa in abka laftiisa uu hubiyo in qalabkaagu taageerayo beddelka font, haddii ay sidaas tahay, badhanka weyn ee "Codso" ayaa u muuqan doona inuu doorto font aad hadda soo dejisay.
App-kan, in kasta oo uu u shaqeeyo sida IFOnt, waa inuu noqdaa beddelka loo leexdo oo keliya haddii ikhtiyaarkii hore uu shaqayn waayo, maadaama abkan Waxay leedahay cillado muhiim ah oo gaar ah. Tusaale ahaan, suurtagal maaha in aad soo dejiso qaababkaaga, sidoo kale app-ka waxa ku habsaday xayaysiisyo mararka qaar noqda mid aad u faragelin kara.
Ka dib falanqeyn hore iyo cashar gaaban, waa in la ogaadaa in Instagram guud ahaan ay tahay qalab aad u faa'iido leh, ma aha oo kaliya isdhexgalka laakiin sidoo kale naqshadeynta. Waxaa la gaaray waqtigii aad bilaabi lahayd baaritaan dheeri ah oo aad tijaabin lahayd farsamooyinkeeda kala duwan iyo codsiyada aan soo jeedinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo beddelo font-ka Instagram-ka